Fall Armyworm (FAW) သတင်းအချက်အလက်များ – PPD Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွေ့ရှိရသော Fall Armyworm ( FAW ) ငမြှောင်တောင်ပိုး၏ ယေဘုယျပြင်ပရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ
Fall Armyworm (FAW) ကင်းထောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်များအလိုက် ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ဂရုပြုလိုက်နာရမည့် အချက်များ
Fall Armyworm (FAW) ငမြှောင်တောင်ပိုး ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
Fall Armyworm ( FAW ) ငမြှောင်တောင်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင် သုံးစွဲနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသော (ထိသေ၊ စားသေ) ပိုးသတ်ဆေးများ
မြန်မာနိုင်ငံဒေသအချို့ရှိဆောင်းအစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံတွင် ကျရောက်လျှက်ရှိသော ငမြှောင်တောင်ပိုးသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးမှတ်တမ်းတင်ကျရောက်သောပြည်ပကျူးကျော်ဖျက်ပိုး(Invasive species) ဖြစ်သည့် Fall Armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုသတ်မှတ်ခြင်း (၃.၁.၂၀၁၉)
Fall Armyworm (FAW) ပြဿနာ အဖြေရှာ(၂၄.၁၂.၂၀၁၈)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငမြှောင်တောင်ပိုး Fall Armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) စတင်တွေ့ရှိ မှတ်တင်တင်ထားရှိမှု (IPPC – International Plant Protection Convention ) သို့ သတင်းပေးတင်ပြထားရှိမှု (၁၁-၁-၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအချို့ရှိ ဆောင်းအစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံတွင် ကျရောက်လျှက်ရှိ သော ငမြှောင်တောင်ပိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးမှတ်တမ်းတင် ကျရောက်သော ပြည်ပကျူးကျော်ဖျက်ပိုး (Invasive species) ဖြစ်သည့် Fall Armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ဖြစ်နိုင်ခြေများကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (၁၉-၁၂-၂၀၁၈)
ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကျရောက်လျှက်ရှိသော ငမြှောင်တောင်ပိုးသည် Fall Armyworm (FAW) မဟုတ်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်း၌ ရှိပြီးသော ငမြှောင်တောင်အမျိုးအစားများသာဖြစ်ကြောင်း (၂၆.၈.၂၀၁၈)
ရောက်လာတော့မည့် Fall Armyworm အန္တရာယ်
နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်လာနိုင်သော အရေးကြီးဖျက်ပိုး ငမြှောင်တောင်ပိုး Fall Armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda သတိပေးချက် (၁၇.၈.၂၀၁၈)